July 18, 2019 – Department of Medical Service
Manangement of common Cardiovascular Surgery
Posted on July 18, 2019 by author 1
Manangement of common Cardiovascular Surgery http://54.145.229.125/wp-content/uploads/2019/07/SOP-Guideline-CVSU-YGH-.pdf ... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံများရှိ ဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ အကြောကျွမ်းကျင်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ ဆေးလူမှု၊ ဆေးမှတ်တမ်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ ၂။ ဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ အကြောကျွမ်းကျင်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကျွမ်းကျင်၊ အဏုမြူရောင်ခြည်ကျွမ်းကျင်၊ မျက်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ နားကျွမ်းကျင်၊ ခြေတုလက်တုကျွမ်းကျင်၊ နှလုံးအဆုတ်စက်ကျွမ်းကျင်၊ ဆေးလူမှု၊ ဆေးမှတ်တမ်းဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ (က) အသစ်ခန့်ထားခြင်း (ခ) ပြောင်းရွှေ့ခြင်း (ဂ) ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း (ဃ) လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း၊ မွမ်းမံသင်တန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊... Read More | Share it now!
၁။ မိမိတို့ဌာန၏ ဒီဇိုင်း၊ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂။ ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများအတွက် ခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းပုံစံများ ပြုစုရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့်ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်များရေးဆွဲနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်မှု ပေးခြင်း။ ၃။ ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ၏ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ တွင် သုံးစွဲသော ခေတ်မီလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ မှာယူတပ်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ... Read More | Share it now!
(၁) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောမူဝါဒနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း၊ (၂) ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)အပါအဝင် လက်အောက်ခံဌာနအားလုံး၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို စုစည်းရေးဆွဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီး ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာနမှ အဆင့်ဆင့်တင်ပြခြင်း၊ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ (၃) စီမံကိန်းလျာထားချက်များနှင့်အညီ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအား အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတို့နှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊ (၄) ... Read More | Share it now!
(က) စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ (၁) တာဝန်ချထားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ – ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် ဝန်ထမ်းများ နေ့(ဂိတ်ဂျူတီ) ည(လုံခြုံရေး) ဂျူတီနှင့် ရုံးပိတ်ရက်များတွင်လည်း တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ချထားခြင်း။ – ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးခန်းတွင်လည်း အလှည့်ကျဆရာဝန် များအား တာဝန်ချထားခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရုံးခန်းတွင်လည်း တာဝန် ချထားခြင်း။ (၂) အိမ်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။ – ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ... Read More | Share it now!